डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा सुरु गरे १९ औँ अनशन - Media Dabali
डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा सुरु गरे १९ औँ अनशन
काठमाडौं- डा. गोविन्द केसीले जुम्लाबाट १९ औँ अनशन सुरु गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि उनले ६ बुँदे माग राखेर सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि उनले अनशन सुरु गरेका हुन् ।
आफ्ना मागहरु सम्बोधनमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै डाक्टर केसीले सोमबारदेखि आफ्नो १९ औँ पटकको आमरण अनशन सुरु गरेका हुन्।
उनले आफ्ना मागहरुमध्ये पहिलो बुँदामै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्न भनेका छन्।
सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएर अनसन बसेका डा.केसीलाई प्रहरीको अवरोध !
डा.गोविन्द केसीले अनशन स्थगित गर्दै जारि गरे यस्तो बिज्ञप्ति
कम्युनिस्ट सरकारको शासन, डा.गोविन्द केसी अघोषित नजरबन्दमा
सोमवार, आश्विन ५ २०७७०७:४६:०६
# गोबिन्द केसी # गाेविन्द केसी